Saraakiil ka tirsan ciidamada badda Puntland oo xukuno xarrig ah maanta lagu riday (Dhegeyso) – Radio Daljir
Saraakiil ka tirsan ciidamada badda Puntland oo xukuno xarrig ah maanta lagu riday (Dhegeyso)
Seteembar 7, 2013 5:39 b 0
Boosaso, Septmber 7, 2013 – Maxkamada ciidamada qalabka sida ee Puntland gaar ahaan qeybteeda gobollada Bari, Karkaar, Sanaag iyo Haylaand aya xukuno kala duwan ku riday ilaa 7 sarkaal oo ka tirsan ciidamada badda Puntland ee loo yaqaan PMPF.
Ragga la xukumay ayaa ku eedeysan in ay afduubteen Markab ay iyagu soo qabteen kana furteen Burcad badeeda, balse waxay ?go?aansadeen in ay mar kale afduubtaan Markabkaas, Maxkamada ayaa falkaas ku tilmaantay Burcadnimo.
Gudoomiyaha Maxkamada ciidamada ee Puntland Cabdifataax Xaaji Aadan ayaa xukunku ku dhawaaqay, wuxuuna sheegay in sanado kala duwan oo xabsi ah ay qaadan doonaan, Askartaan ka tirsanaa ciidamada booliska badda, kadib markii lagu xaqiijiyey dembiyada ay ku eedeysnaayeen.
????????? Dable buux Cabdi Cilmi (1 sano oo xarrig ah)
????????? Cali Cismaan Maxamed (1 sano oo xarrig ah)
????????? Cabdi cabdulaahi wayrax (1 sano oo xarrig ah)
????????? Maxamed Oomaar Maxamed (1 sano oo xarrig ah)
????????? Cabdulqaadir Jaamac Faarax ( 1 sano xarrig ah)
????????? Saleebaan Maxamed Nuur ( 1 sano xarrig ah)
????????? Dable baashe Cabdullaahi yuusuf ( 1 sano oo xarrig ah)
Xukunka saraakiishan ka tirsanaa ciidanka badda ayaa noqonaya kii ugu horeeyey ee lagu fuliyo Askar ka tirsan ciidankaas, xarriga lagu ridday oo min halsano ah ayaa wuxuu noqonayaa xabsi ciidan, sida ay sheegeen saraakiisha Maxkamada.
Dhegeyso: war-bixin uu xukunka ka diyaariyey Axmed Nuune oo Daljir ka tirsan
Baahin: Sabti, 7 Sep 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdirisaaq C Cabdi Silver ~ Daljir ~ Galkacyo
Madaxweynaha Jubba oo booqday Muqdisho si loo dhameeyo heshiiskii dowladda iyo maamulka